ESI ZOO IHE "ỌNỌDỤ DI NA NWUNYE" NA KỌNTAKTỊ - VKONTAKTE - 2019
Esi zoo ọnọdụ di na nwunye VKontakte
Miracast bụ nkà na ụzụ nke Microsoft mepụtara maka ikuku ikuku nke ihe oyiyi, ụda na TV na ngwaọrụ ndị ọzọ. Njirimara a dị maka ngwaọrụ niile nwere nkwụnye Wi-Fi kwesịrị ekwesị. Isiokwu a ga-akọwa usoro nke enyere Miracast aka na Windows 10, nakwa dozie ụfọdụ nsogbu ndị metụtara ọrụ ya.
Kwado ọrụ ebube na Windows 10
Teknụzụ ikuku nke Mirasta na-enye nnyefe nnyefe ziri ezi n'enweghị iji HDMI USB gaa ngwaọrụ dị iche iche na-akwado nke a. N'ime ezughị okè a ga-amata ọrụ na-adịghị agwụ agwụ na ọdịda ndị na-adịghị adị.
Usoro 1: Ogwe ụzọ keyboard
Ịtọlite ​​ma na-agba ọsọ Wi-Fi Direct na-eji mkpirisi ụzọ mkpirisi nwere ike were naanị nkeji ole na ole. Usoro a yiri ihe jikọtara kọmputa na ngwaọrụ ọzọ site na Bluetooth.
Tụgharịa Mirakast na ngwaọrụ ejikọrọ. Ọ bụrụ na nke a abụghị, wee gbalịa ịmalite Wi-Fi.
Ugbu a jigide keyboard Nweta + P.
N'okpuru ndepụta, chọta ihe ahụ "Ijikọ na ngosi ikuku".
Usoro nyocha amalite.
Họrọ mpaghara achọrọ na listi.
Mgbe sekọnd ole na ole ị ga-ahụ nsonaazụ na ngwaọrụ ejikọrọ.
Ugbu a, ị nwere ike ịnweta ọdịdị dị elu ma dị mma na ngwaọrụ ọzọ na-ejighị eriri.
Usoro 2: Nhazi System
I nwekwara ike ijikọ ihe niile "Nhọrọ" usoro. Usoro a dị iche na nke mbụ site na mmejuputa ya, mana ị ga-enweta otu ntụgharị ahụ.
Pinch Na-emeri + m ma ọ bụ gaa "Malite"wee pịa "Nhọrọ".
Na taabụ "Ngwaọrụ jikọtara" Ị nwere ike ịchọta ma jikọọ kọmputa gị na ihe ọzọ. Iji mee nke a, pịa "Na-agbakwụnye ngwaọrụ".
Nchọgharị ahụ ga-amalite. Mgbe usoro ahụ chọtara ihe achọrọ, jikọọ ya.
Dịka ị nwere ike ịgbakwunye ngwaọrụ site na "Nhọrọ" na ijide ike nke Mirakast.
Idozi nsogbu ụfọdụ
Ọ bụrụ na ịnata ozi na kọmpụta gị na-akwadoghị na ọ kwadoghị Miracast, o yikarịrị ka ị gaghị enwe ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa ma ọ bụ nkwụnye ahụ wuru na-akwadoghị ọrụ a. Nsogbu mbụ nwere ike idozi site na ịtinye ma ọ bụ na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala site na saịtị ọrụ.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na iji ngwaọrụ Windows
Ọ bụrụ na ngwaọrụ ejikọrọ ya ogologo oge, ihe kpatara ya nwekwara ike ịbụ na ndị ọkwọ ụgbọala na-ezighị ezi ma ọ bụ ndị na-adịghị mkpa.
Ịgbanwe Ebube na Windows 10 dị mfe, n'ihi ya, i kwesịghị inwe nsogbu. Tụkwasị na nke a, ọtụtụ nkà na ụzụ na-akwado nka na ụzụ a, nke na-eme ka nnyefe nke onyinyo ma dị mfe.